Dib-u-eegista Dastuurka Soomaaliya oo Lagu Soo Gabagabeeyay Dalka Djibouti – Walaal24 Newss
March 4, 2019	0	By walaal24
Banbax howleedkan oo ay ka soo qaybgaleen hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka ee kala ah Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga La socodka ee Dib-u-eegista Dastuurka ee baarlamaanka, iyo Guddiha Madaxbannaan ee Dib-eegista iyo Hirgelinta Dastauurka, oo socdyay muddo 5 maalin ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti.
Xiritaanka shirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxda saddexda hay’adood ee u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka, Guddoomiyaha golaaha wakiilada Puntland mudane C/xakiim Mohamed Ahmed, iyo habdhowraha golaha shacabka mudane Sharmarke Garaad Saleebaan iyo lataliyaasha hayadaha kala duwan.
Intii u socday banbax howleedkan waxaa saddexda hay’adood ee u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka ay si wadajir ah u diyaariyeen istiraatiijiyadda midaysan ee wacyigalinta iyo latashiga dadwaynaha ee dib-ueegista dastuurka iyo qorshe howleedka midaysan ee latashiga iyo wacyigalinta dadwaynaha ee arrimaha dib-u-eegista dastuurka sanadkan 2019. Sidoo kale waxaa la isku raacay waqtiga la bilaabayo latashiyada iyo wacyigalinta dadwayanah ee ku saabsan cutubyada dib-u-eegista lagu sameeyay.
Xubnihii ka hadlay kulanka ayaa bogaadiyay wadashaqaynta saddexda hay’adood ee u xilsaaran dib-ueegista dastuurka iyo sida ay uga go’antahay in la dhamaytiro dastuurka, waxayna ballan qaadeenin ay sii xoojin doonaan wada shaqayntooda maadaama ummadda soomaaliyeed ay ka sugayso dastuur dhamaystiran oo lagu wada heshiiyay.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland C/xakiim Maxamed Axmed oo hadal ka yiri kulanka xiritaanka ayaa sheegay in loo baahanyahay in laga wada shaqeeyo sidii ummadda soomaaliyeed dhibta iyo is qabqasiga ay uga bixi lahayd si taas loo gaarana loo baahanyahay heshiis ummadda ay wada dhigatay, kaasna waa sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka oo ah heshiiska bulshada.
Gabagadii, waxaa lagu ballamay in la bilaabo ololaha wacyigalinta iyo latashiyada dadwaynaha ee dib-ueegidta dastuurka gaar ahaan cutubyada dib-u-eegista lagu sameeyay bisha maarso 2019, iyadoo qorshuhu yahay in la dhamaytiro dastuurka ku meelgaarka ah sanadkan 2019 .
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Khudbad ka jeediyay shirka Midowga Baarlamaanada Carabta oo ka furmay dalka Jordan
Imtixaamkii Shahaadiga Dugsiga sare ee ladoonayay malintiisa labaad in loo fadhiisto oo baaqday
Golaha Shacabka Baarlamanka JFS oo ansixiyay Xeerka Saxaafadda Soomaaliyeed
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Agaasimaha Cusub ee Madaxtooyada Qaranka oo kulan wada yeeshay
Shirweynaha Qaran ee soo Bandhigidda iyo Xaqiijinta Hanaanka dhab-u-heshiisiinta oo Muqdisho ka furmay
Madaxweynaha Koofur Galbeed iyo mas’uuliyiinta Gobollada oo la kulmay hay’adaha samafalka
Dhageyso: Dilkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oo dad lasoo qabqabtay
Dhagayso: Madaxda Maamul Gobaleedyada oo looga digayo fara-gelinta khilaafka Madaxda Galmudug
Dhageyso: Shirka Isku-xirka Cadaladda oo looga dooday dardar-gelinta qorshaha horumarinta Garsorka iyo fulinta go’aanada Maxkamadaha
Dhageyso: Maalinta Berri ah oo lagu wadao in Shirka Daah-furka Ololaha Dib-u-eegista Dastuurka magalada Muqdisho
Daawo: Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Xukun ku riday rag lagu edeeyay Qaraxyo iyo Dilal geystay
Daawo: Madaxweyne Muuse biixi oo ka hadlay waxyabaha ka hirgalay heshiisyadii Dowlada Imaraadka iyo wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaliland
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo khudbad ka jeediyay dafcada kowaad ee tababarka Ardada Qaranka
Daawo: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo kulan la yeeshay Gudoomiyaalka Degmoyinka Gobolka Banaadir